Ny lahatsoratr'i Pete Eppele momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Pete Eppele
Pete dia nitondra traikefa paikady vokatra 20 taona, nanampy ireo orinasa Fortune 500 hampiasa Big Data hanatsarana ny fahombiazan'ny orinasa. Amin'ny maha filoha lefitra zon'ny vokatra sy siansa azy dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana i Pete ZilliantNy ezaka ataon'ny R&D ary ny famaritana ny làlan-dàlana sy ny fepetra takiana amin'ny vokatra. Talohan'ny Zilliant dia i Pete no filoha lefitry ny varotra vokatra tao Yclip. Talohan'ny Yclip, Pete dia nitantana ny firaketana fitrandrahana angon-drakitra goavambe sy fanohanana fanapahan-kevitra ampiasain'i Walgreens, Fanatsarana ny tranon'ny Lowe ary Pepsi / Frito Lay.
Talata, Febroary 11, 2020 Talata, Febroary 11, 2020 Pete Eppele
Satria manome lanja bebe kokoa ny hafainganana sy ny hafainganam-pandeha ny tontolo maoderina, ny fahafaha-mampiditra ny fotoana tena izy, ny vidiny tena ilaina ary ny fitarihana ny varotra ao amin'ny fantsom-pivarotany dia afaka manome ny mpandraharaha ambony fahefana ny mpifaninana raha toa ka mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpanjifa. Mazava ho azy fa rehefa mitombo ny fitakiana fahombiazana dia mitombo koa ny fahasarotan'ny orinasa. Ny toe-tsena sy ny dinam-pandraharahana dia miova amin'ny hafainganam-pandeha haingana indrindra, mamela ireo orinasa sahirana mamaly ny fividianana vidiny